Arduino အတွက်အကောင်းဆုံး LCD ဖန်သားပြင် | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
Arduino နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စီမံကိန်းများသည်အလွန်လူကြိုက်များပြီး Raspberry Pi ကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်ကုမ္ပဏီများအကြားတွင် Free Hardware Project များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ပြောမယ့်အကြောင်းပဲ LCD + Arduino: လူကြိုက်အများဆုံးပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်.
LCD display သည်ပိုမိုချွေတာသော၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Arduino ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အတူလိုက်ပါရန်အလွန်ကြီးစွာသော option ကိုစေသည်။ ဒါပေမယ့် LCD မျက်နှာပြင်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Arduino board နှင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။ မည်သည့်စီမံကိန်းများကို LCD နှင့် Arduino နှင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။ ဤပေါင်းစပ်မှုကိုအသုံးပြုသင့်ပါသလား။
1 LCD ဆိုတာဘာလဲ။
2 ဘယ်လို LCD အမျိုးအစားတွေရှိပါသလဲ။
3.3 I2C OLED LCD ဖြစ်သည်
3.4 E-Ink LCD ဖြစ်သည်
4 LCD မျက်နှာပြင် Arduino ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။
5 ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းအတွက် LCD မျက်နှာပြင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုပါသလား။
အသစ်သောသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့ LCD သက်တမ်းတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သော်လည်း LCD ၏ဆိုလိုရင်းကိုမသိရှိကြပါ။ LCD သည် Liquid Crystal Display သို့မဟုတ် Liquid Crystal Display ဟုခေါ်သောအရာကိုဆိုလိုသည်။ LCD + Arduino နှင့် Free Hardware တို့၏ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်တိုးချဲ့ထားသောအဆုံးမဲ့အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သော alarm နာရီ၊ နာရီဖန်သားပြင်၊ ဂဏန်းတွက်စက်စသည်တို့ကဲ့သို့သောပစ္စည်းမျိုးစုံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်သေးငယ်သည့်သို့မဟုတ်ကြီးမားသော screen တစ်ခု။
LCD ဖန်သားပြင်များသည် Arduino Project board များအပါအဝင်မည်သည့် Free Hardware နှင့်မဆိုသဟဇာတဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်ဘုတ်များ၌အီလက်ထရွန်းနစ်ဘုတ်နှင့် LCD မျက်နှာပြင်အကြားဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက်အချို့သောချိတ်ဆက်မှုများသို့မဟုတ်တံသင်များရှိရန်လိုအပ်သည်.
ဦး စားပေး၊ မတူညီသော LCD မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကိုအသုံးပြုရန်အတားအဆီးမရှိပါ။ တစ်နည်းပြောရလျှင် Arduino ဘုတ်တစ်ခုတည်းသည်အရွယ်အစားသေးငယ်သောစကားပြောရန် ၅ လက်မ၊ ၂၀ လက်မ LCD မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ် ၅ × ၂ အက္ခရာအရွယ်အစားကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့သတိထားရမယ် Arduino ဘုတ်သည်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့်မတူပါထို့ကြောင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖော်ပြရန်မက်ဆေ့ခ်ျသည်မျက်နှာပြင်အကြီးတွင်ရှိသကဲ့သို့ပင်၎င်းသည် Arduino ဘုတ်နှင့်အတူတူပင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
LCD screen တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် Arduino ဘုတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောတံသင်သည်အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
GND နှင့် VCC
D0 မှတံသင် D7
သင့်တွင်အထက်ပါနှင့်သင့်လျော်သောတံသင်နှင့်တံသင်လုံလုံလောက်လောက်ရှိလျှင်, LCD screen သည် Arduino board နှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် connection တည်ရှိမှုရှိစေရန် devices နှစ်ခုလုံး၏ pin များကိုအမြဲစစ်ဆေးသင့်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Arduino ဘုတ်အတွက် lcd display နှင့် ချိတ်ဆက်၍ မရနိုင်ပါ။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးရှိပါကစျေးကွက်တွင် Arduino နှင့်အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပြီးစျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်စျေးကွက်တွင်မတူညီသော lcd module များရှိသည်။
ဘယ်လို LCD အမျိုးအစားတွေရှိပါသလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိတွင်ဈေးကွက်တွင် LCD အမျိုးအစားသုံးမျိုးကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
လိုင်းများ LCD ။
အချက်များအားဖြင့် LCD ။
El Line LCD ဆိုသည်မှာလိုင်းများမှတစ်ဆင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပြသသည့်မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်ကိုလိုင်းများတွင်ထားရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုဘောင်မှ ထွက်၍ မရပါ။ ဒီ LCD အမျိုးအစားဟာအသုံးအများဆုံး၊ ချွေတာပြီးလူသိများတယ်ဒါပေမယ့်ဂိမ်းအနည်းဆုံးပေးတဲ့ lcd အမျိုးအစားလည်းရှိတယ်။ အချက်အလက်အချို့ကိုသာပြသပြီးပုံမှန်အားဖြင့်စာသားသာဖြစ်သည်.
El LCD dot ၎င်းသည်ယခင် lcd အမျိုးအစားနှင့်အတူတူနီးပါးအလုပ်လုပ်သော်လည်းယခင်ကဲ့သို့မတူပါ lcd အချက်များအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရမှတ်တစ်ခု matrix ကိုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဤ lcd အမျိုးအစားတွင်စာသားနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုပင် LCD မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နေရာချနိုင်သည်။ နောက်ထပ်ဘာလဲ ကျွန်တော်တို့မှာတူညီတဲ့ LCD မျက်နှာပြင်မှာ font size အများကြီးရှိနိုင်တယ်, lcd လိုင်းများပြသမှုတွင်မဖြစ်ပျက်သောအရာ, အရွယ်အစားအမြဲအတူတူဖြစ်ရမည်။
El OLED မျက်နှာပြင် ၎င်းသည်များစွာသောကိုယ်ပိုင်ပြသမှုအမျိုးအစားများအတွက်ဖြစ်ပြီးအခြားသူများအတွက်မူ၎င်းသည် LCD အမျိုးအစားများအတွင်းတွင်ရှိသည်။ OLED မျက်နှာပြင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားသတင်းအချက်အလက်ကိုပြသပေးသည့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးသည် LCD မျက်နှာပြင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည် ၎င်း၏ဖန်တီးမှုအတွက်အော်ဂဲနစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ ဦး ဆောင် diodes အသုံးပြုသည်။ ယခင်အမျိုးအစားများနှင့်မတူဘဲ OLED display များသည်ပိုမိုမြင့်မားသော resolution၊ အနိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု။ ကွန်ပျူတာမော်နီတာများသို့မဟုတ် dot lcd များကဲ့သို့ OLED ဖန်သားပြင်များသည်အကြောင်းအရာများကိုပြသရန်အတွက် (တူညီသောဖန်သားပြင်တွင်အရောင်များစွာကိုသုံးသောကြောင့်) အစက် (သို့မဟုတ်) အစက်အပြောက်များ matrix ကိုအသုံးပြုသည်။
El LED သို့မဟုတ် LCD Led display သည် OLED Display နှင့်ဆင်တူသည်, ဒါပေမယ့် led diodes အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်ဆံ့မခံကြဘူး။ သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်က OLED မျက်နှာပြင်လောက်မကြီးမားပေမယ့် dot LCD screen ထက် resolution ကိုပိုပြီးပေးစွမ်းပြီးအရောင်ကိုပေးပါတယ်။
El TFT display သည်ဈေးကွက်တွင်နောက်ဆုံးပေါ် LCD အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ TFT မျက်နှာပြင်သည်ကွန်ပျူတာမော်နီတာများသို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားစက်များကဲ့သို့ပစ်ဇယ်များကိုအသုံးပြုပြီး၎င်းဖန်သားပြင်မှတဆင့်မည်သည့်အချက်အလက်အမျိုးအစားကိုမဆိုထုတ်လွှတ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ၎င်း၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည်ယခင်အမျိုးအစားများထက်ကြီးမားသည်။ ထို့ကြောင့်အရွယ်အစားသေးငယ်သည်။ ဒီပြသမှုများ၏အရွယ်အစားကိုအခြား display အမျိုးအစားများနှင့်မတူဘဲလက်မဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ၎င်းတို့ကိုအက္ခရာများနှင့်မျက်နှာပြင်အကျယ်ဖြင့်တိုင်းတာသည်။
အွန်လိုင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မရေမတွက်နိုင်အောင် lcd ပြသထားတဲ့မော်ဒယ်လ်တွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လူအနည်းငယ်ကလူကြိုက်အများဆုံးပါ။ ဒီလူကြိုက်များမှုက၎င်း၏လွယ်ကူသောဝယ်ယူ၎င်း၏စျေးနှုန်း, ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်ရိုးရိုး၎င်း၏အရည်အသွေးကြောင့်ဖြစ်သည်။။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမော်ဒယ်များအကြောင်းပြောဆို:
ဒီမျက်နှာပြင်က Nokia 5110 လက်ကိုင်ဖုန်းဟောင်းတွေကလာတယ်။ ဤမိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ LCD သည်မိုဘိုင်းဖုန်းထက်သာလွန်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်၎င်း display ကိုကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်ဆက်လက်ရောင်းချနေသည်။ မျက်နှာပြင် monochrome ဖြစ်ပြီး Lineas LCD အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Nokia 5110 display သည် row ၄၈ ခုနှင့်ကော်လံ ၈၄ ခုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်း၏စွမ်းအားသည်ထိရောက်မှုမရှိသော်လည်းပုံများပြရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည်။ ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ပေမယ့်အလွန်ကောင်းလှ၏ screen ကိုမှန်ကန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် backlighting ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်ကင်းမဲ့သော modules များရှိနိုင်သော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည် backlighting ဖြင့်လိုက်ပါလေ့ရှိသည်။ မျက်နှာပြင်တွင် Philips PCD8544 driver ကိုအသုံးပြုသည်။ Nokia 5110 LCD မျက်နှာပြင်ကိုတွေ့နိုင်သည် 1,8 ယူရိုများအတွက်စျေးဆိုင်.
အဆိုပါ module တစ်ခု Hitachi HD44780 LCD ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်သူ Hitachi မှဖန်တီးထားသော module တစ်ခုဖြစ်သည်။ LCD panel သည် monochrome ဖြစ်ပြီးလိုင်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှာတွေ့နိုင်တယ် ဇာတ်ကောင်ပေါင်း ၁၆ လုံးပါ ၀ င်သောလိုင်း ၂ ခုနှင့်အက္ခရာ ၂၀ လုံးစီလိုင်း ၄ ခုပါသောမော်ဒယ်တစ်ခု။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်မည်သည့်စတိုးဆိုင်တွင်မဆို Hitachi HD44780 LCD display ကိုတွေ့ရလေ့ရှိသော်လည်း၎င်းမှာ screen မရှိဘဲ Hitachi HD44780 Controller ကိုသာတွေ့နိုင်သည်။ 1,70 ယူရိုများအတွက်မျက်နှာပြင်ပေါင်း controller ကို သာ 0,6 ယူရိုယာဉ်မောင်း။
I2C OLED LCD ဖြစ်သည်
ဤ LCD display သည် OLED အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ I2C OLED LCD သည် I2C ပရိုတိုကောလ်မှတစ်ဆင့် Arduino သို့ဆက်သွယ်ပေးသည့်တစ်လက်မအရွယ်အရွယ် monochrome OLED မျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။, ဒီပရိုတိုကောကငါတို့ pin တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကဘတ်စ်ကားကိုသုံးတယ်။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်လိုအပ်သောသူများ၏ရှေ့မှောက်၌လိုအပ်သောလေးတံသင်လိုအပ်ဖြစ်ခြင်း။ ဒီ LCD မျက်နှာပြင်အတွက်မောင်းနှင်သူသည်ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အခမဲ့စာကြည့်တိုက်များကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီမော်ဒယ်၏စျေးနှုန်းသည်ယခင်မော်ဒယ်များနှင့်မတူပါ။ သို့သော်အသုံးပြုသူများစွာမှတတ်နိုင်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် ယူရိုယူရို 10 ကိုရှာပါ.
E-Ink LCD ဖြစ်သည်
E-Ink LCD မျက်နှာပြင်သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုပြသရန်အီလက်ထရောနစ်မင်ကိုအသုံးပြုသည်။ ကျန်မော်ဒယ်များလိုပဲ Arduino နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ I2C protocol ကိုအသုံးပြုသည်။ ဖန်သားပြင်များသည် TFT အမျိုးအစားများရှိသော်လည်းအီလက်ထရောနစ်မင်ကို အသုံးပြု၍ စားသုံးမှုကိုများစွာလျော့နည်းစေပြီး၊ အရောင်မျက်နှာပြင်များ (ယခုအချိန်တွင်) မရှိသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးရှိသည် အနက်ရောင်နှင့်မီးခိုးရောင်စကေး၌တည်၏။
ဤ lcd ဖန်သားပြင်များနှင့် ပတ်သက်၍ သိလိုစိတ်တစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းနှင့်အရွယ်အစားသည်ညီမျှသည်ဟုဆိုရပေမည်။ ကြှနျုပျတို့ ... လုပျနိုငျပါတယျ ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အရွယ်အစားကြီးကြီး, မျက်နှာပြင်ပိုမိုစျေးကြီးရှာဖွေပါ။ ထို့ကြောင့် ၁ မှ ၂.၅ လက်မ E-Ink ဖန်သားပြင်များ သူတို့ကတစ်ယူနစ်ကို ၂၅ ယူရိုစျေးရှိတယ်။ ပိုကြီးတဲ့ panel တွေဟာယူနစ်တစ်ထောင်ကိုယူနိုင်ပါတယ်။
LCD မျက်နှာပြင် Arduino ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ။
LCD screen တစ်ခုနှင့် Arduino အကြားဆက်သွယ်မှုသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အခြေခံသဘောအရ ကျနော်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောတံသင်လိုက်နာခြင်းနှင့် Arduino ဘုတ်သူတို့ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ရှိသည်။ ဆက်သွယ်မှုပုံသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ဒါပေမယ့် LCD screen ကို Arduino နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတည်းသောအရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ထပ်ဘာလဲ ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောကုဒ်များဖန်တီးသည့်ပရိုဂရမ်ကိုကူညီရန်စာကြည့်တိုက်ကိုအသုံးပြုရမည် ဖန်သားပြင်နှင့်အတူမှန်ကန်စွာ။ ဒီစာအုပ်ဆိုင် ၎င်းကို LiquidCrystal.h ဟုခေါ်သည် ၎င်းကိုအခမဲ့ရယူနိုင်သည် တရားဝင် Arduino က်ဘ်ဆိုက်။ ဤစာကြည့်တိုက်ကိုအခြားစာကြည့်တိုက်များကဲ့သို့အသုံးပြုရမည်။ ကုဒ်၏အစတွင်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။
LCD မျက်နှာပြင်တစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်ရန် Arduino ဘုတ်အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်မြန်ဆန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းအတွက် LCD မျက်နှာပြင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုပါသလား။
အထက်ပါနှင့်အတူဆက်လက်, ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းသို့မဟုတ်စီမံကိန်းအတွက် LCD မျက်နှာပြင်နှင့် Arduino ရှိခြင်းသည်တကယ်အဆင်ပြေသလားဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရပါမည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါထင်သောအချို့သောစီမံကိန်းများအတွက်လိုအပ်သည်နှင့်သူတို့အဘို့အကျန်သည်လိုအပ်သောထက်ပို။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာတစ်ခုခုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 3D Printer ၏နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်များအကြောင်းပြောနိုင်သည်၊ အချို့ကိစ္စများတွင် LCD display နှင့်အခြားဘာမျှမထည့်သွင်းနိုင်သော်လည်းမော်ဒယ်၏စျေးနှုန်းသည်သိသိသာသာစျေးကြီးသည်။
ဤအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်သည် LCD display လိုအပ်သည်ဟုမထင်ပါ။ သို့သော်အချို့သောစီမံကိန်းများတွင် LCD display သည်အလွန်အရေးကြီးသောကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်နာရီ၊ ဂိမ်းစက်တစ်ခုသို့မဟုတ် GPS တည်နေရာတစ်ခုကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများဖြစ်သည်။ ပရောဂျက်များ ထိရောက်စွာလည်ပတ်ရန်အတွက် graphical interface ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသောအရာသည်အထူးသဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူအများဆုံးအသုံးပြုသူများအတွက်မိုက်မဲရာကျသည်။ သို့သော်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းသည်မဆိုစီမံကိန်းကိုပိုမိုစျေးကြီးစေပြီးလက်တွေ့မကျနိုင်အောင်ပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းတွင် LCD ဖန်သားပြင်ရှိသင့်မသင့်ကိုဆန်းစစ်ရန်အရေးကြီးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Arduino » LCD ဖန်သားပြင်နှင့် Arduino